आइसीसी विश्व क्रिकेट लिगमा नेदरल्याण्डसँग नेपालको लज्जास्पद हार - Himalayan Kangaroo
आइसीसी विश्व क्रिकेट लिगमा नेदरल्याण्डसँग नेपालको लज्जास्पद हार
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ श्रावण २०७३, शनिबार १५:०५ |
काठमाडौं । नेदरल्याण्डलाई उसकै मैदानमा हराएर आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनशीपमा राम्रो स्थान पाउने नेपालको सपना पहिलो खेलमा भने नराम्ररी तुहिएको छ । बेलायतमा भएको प्रशंसायोग्य प्रदर्शन पछि हौसिएको नेपाली क्रिकेट टोली डच टोलीसंग जम्न नसक्दा दोश्रो खेलमा ठूलो सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
सन् २०१९ मा हुने विश्वकप छनौटको अभियानमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली नेदरल्याण्डसगको पहिलो खेलमा निराश बनेको छ । घरेलु टोली नेदरल्याण्डविरुद्ध नेपालको व्याटिङ चल्न नसक्दा नेपाली टोली सात विकेटको अन्तरमा पराजित भएको छ । नेपाल विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनशीपको कम्तिमा शीर्ष चार भित्र रहने सम्भावनालाई जोगाईराख्न पनि नेदरल्याण्ड विरुद्धको खेलमा जित्नुपर्ने दवाव थियो । तर नेपालले पुरोनो शैलीलाई पछ्याउदै फेरि एक पटक नमिठो हार व्यहोरेको छ । ।
जितको लक्ष्य नेपालले नेदरल्याण्ड्ससँग आफ्नो दोस्रो खेल सोमवार खेल्नेछ । नेदरल्याण्डको एमस्टेलभिनस्थित भी.आर.ए. मैदानमा खेलमा घरेलु टोली नेदरल्याण्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको पछि नेपालले ब्याटिङको निम्तो पाएको थियो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले ३८ दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुदै मात्र ९४ रनको योगफल तयार पारेको छ । नेदरल्याण्डको बलियो टिमसामु नेपालका ब्याट्सम्यानहरु भने क्रिजमा टिक्न सकेनन् । नेपालका लागि ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल १२ बलमा ११ रन बनाउदै बोल्ड भएका थिए । अनिल मण्डल भने २० रनमा आउट भए । त्यसैगरी कप्तान पारख खड्का भने क्रिजमा थोरै बेर पनि टिक्न सकेनन् । उनी मात्र एक बलमै शुन्य रनमा आउट भए । बलिङतर्फ नेदरल्याण्डका टिमभान डेर र माईकल रिपोनले समान तीन विकेट लिएका थिए ।
९५ रनको सामान्य विजयी लक्ष्य सहित मैदानमा आएको नेदरल्याण्डले भने १६ ओभर ५ बल मा पूरा गरेको थियो ।
Previousप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीकै सिर्टफिकेट कीर्ते
Nextबल्ल मिल्यो नेविसंघको विवाद
चेल्सी फाइनलमा प्रवेश
१० बैशाख २०७४, आईतवार ०३:०५
नेपाल-अमेरिका भिड्दै : को कति बलियो ?
२५ असार २०७२, शुक्रबार ११:३७
मेस्सीले ह्याट्रिक गरेपछि अर्जेन्टिनाले विश्वकपको टिकट काट्यो
२५ आश्विन २०७४, बुधबार ०२:४१
विश्वकप फुटबलको ट्रफीका निर्माता गाजानिगाको निधन
१७ कार्तिक २०७३, बुधबार ०७:५६